Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu dilay Muqdisho – Radio Muqdisho
Kooxo hubeysan ayaa goor dhow ku dilay degmada Xamar Jajab Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Qayaad Barre.
Xildhibaanka ayaa la dilay xilli uu ku sii wajahnaa xarunta Baarlamaanka, oo maanta Xildhibaanadu ay ku leeyihiin kulan codka kalsoonida loogu qaadayo Xukuumadda cusub ee uu dhawaan soo dhameystiray Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Xildhibaan Prof Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa u xaqiijiyay dilka Xildhibaanka, isagoo uga tacsiyadeeyay ehelada iyo asaxaabta uu ka tegay.
“Innaa Lillaahi waa innaa Ilaahi raajicuun, waxaa goor dhaw na soo gaartay in la dilay Xildhibaan Cabdullaahi Qayaad Barre, xilli uu ku guda jiray howlihiisa shaqo, marka Ummadda Soomaaliyeed ayaan uga tacsiyadeynaynaa dilka Xildhibaanka iyo ehelada uu ka baxay” ayuu yiri Xildhibaan Dalxa.
Warka ayaa intaa ku daraya in Xildhibaanka lagu dilay agagaarka Isgoyska Ceel Gaabta ee degmada Xamar Jajab, iyadoo kooxihii falka dilka ah fuliyay ay goobta ka baxsadeen.
DAAWO: Xildhibaanada haweenka oo shaaciyay inay taageersanyihiin xukuumadda cusub